Opinion – Page 2 – Puntland News
Hordhac Maclumadka Centre of Social and Organisation Studies (CSOS) ay soo ururisay oo isugu jirta raad-raac muqaalo iyo falanqayn warbixino sugan leh, ujeedada ka dambaya baaris cilmiyeedka waxay tahay mid lagu saxayo ama loogu soo ban-dhigayo macluumad waafiya aragtida…
Hoggaan xun abaar waa ka daranyahay. W/Q Axmed-yaasiin Max’ed Sooyaan.
Bal adigu malee, roob la’aanta dalka ka iyo abaarta jirta waxaaba taas ka daran xil-kasnimo la’aanta nimanka u mansab sheeganaya mas’uuliyadda dalka! Arrintu waxay maraysaa meel Ilaahay ogyahay! Heerka uu kulka marayo iyo dhirtii iyo ciiddii siday u engegeen waxaad…
April 24, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 2
RE: Waxaan halkan uga tacsinaynayaa dadkii reer Puntland ee Al-Shabab ay qaraxa ugu gaysteen
Anoo ah Ambassador Abdirashid Aden Sed, waxaan halkaan tacsi u marinayaa dhamaan dadka reer Puntland iyo Somalida kaleeto ee nabadda iyo horumarka jecel geerida ku timid dadkii weerarkii argagisnimo ee ismiidaaminta ahaa oo ururka AL-Shabab ka gaysteen Magaalada Galkacyo. Dadka halkaas ku dhintay waxaa…
April 1, 2016 · by	Puntland News · 0